खतिवडालाई ‘१४ लाखको घडी’ चोर दोष लगाउनेको खुल्यो पहिचान ! « Channel Np
मनोरञ्जन टिभी प्रवास पत्रिका स्वास्थ्य/जीवनशैली अन्तर्वार्ता अचम्म धर्म/दर्शन कृषि/प्रविधि ENGLISH खतिवडालाई ‘१४ लाखको घडी’ चोर दोष लगाउनेको खुल्यो पहिचान !
प्रकाशित मिति : Wednesday, January 11th, 2017 at 11:06 AM
काठमाण्डौ, २७ पुस । चोरेर हो या नचोरिकनै सामाजिक सञ्जालहरुमा भारइरल बन्यो, ‘१४ लाखको घडी’ । युवा सांसद रामहरि खतिवडालाई नजिकबाट चिन्नेहरुले जतिसुकै हल्ला गरिए पनि नपत्याउने यही विषयलाई लिएर उनैले फरक–फरक टिप्पणी दिइरहँदा समाचार सुन्नेहरु पनि अन्योलयमा छन् ।
घटना गत बिहीबार, लाजिम्पाटस्थित होटल -याडिशनमा सञ्चालित फिटनेश क्लब -याडको हो । पूर्वप्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङका छोरा प्रवलमानले लकरमा राखेको १४ लाख मूल्यको रोलेक्स घडी हराएको उजुरी दरबारमार्ग प्रहरीलाई दिए । र, क्लबमा त्यसबेला रहेका सबैसँग सोधपुछ हुँदै जाँदा रामहरिले घडी प्रहरीलाई बुझाइदिए ।
यसपछि समाचार विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्यो । रामहरिले तत्कालै प्रतिक्रिया दिए, ‘त्यहाँ जाने एकजना साथीकी श्रीमती प्रहरीमा जागिरे छन्, उनलाई भनेको ठाउँमा सरुवा गर्न नसक्दा ममाथि षड्यन्त्र भयो ।’ रामहरिले भन्न खोजेकी प्रहरी हुन्, डिएसपी गंगा पन्त । २०५६ सालमा इन्स्पेक्टरमा भर्ना भएकी । दुई वर्षअघि उक्त ब्याचको डिएसपीमा बढुवा हुँदा गंगा एक नम्बरमा परेकी थिइन् ।